Ikhamera kathathu yeRedmi K20 ibonakala kwimifanekiso yayo emitsha | I-Androidsis
Ikhamera kathathu yeRedmi K20 ityhilwe kwaye yaqinisekiswa kwimifanekiso yayo emitsha enikezelweyo
Kwiintsuku ezidlulileyo, uRedmi uyakuqinisekisa oko Umhla wokuphehlelelwa koluhlu lwee-K20 yile izayo ngoMeyi 28. Ngale mini kuya kuhamba thaca ii-mobiles ezimbini ezizakuyenza I-Redmi K20 kunye ne-K20 Pro.
Ezi zixhobo bezininzi kakhulu kwiindaba kwiiveki ezidlulileyo. Kwaye ngoku, ukuqhubeka nokuthetha ngabo, inkampani yabelane ngohlobo olusemthethweni lweRedmi K20, Ngulowo uboniswe ngasentla njengomfanekiso wekhava. Ityala elivelileyo lomnxeba esiwubonisa apha ngezantsi likhutshiwe.
Kunzima ukuchaza ukugqitywa kweRedmi K20, kodwa siqinisekile ukuba umenzi wefowuni uza kuchitha icandelo elibalulekileyo lokusungulwa echaza ukuba baphumelele njani kuyilo olunomdla, olwahlukileyo kuninzi lwenkampani esisisebenzisileyo.
Ityala lokukhusela iRedmi K20
Ifowuni ubukhulu becala ibomvu, ngokoko sinokubona ekunikezelweni, kodwa kukwakho nemibala eluhlaza okwesibhakabhaka esicinga ukuba iyakutshintsha kuxhomekeke kwikona eboniswa yimitha yokukhanya kuyo.
I-Redmi K20 iya kuba nayo iikhamera zangemva ezintathu ezibekwe embindini wefowuni. Igumbi lokuqala lahlulwe kwamanye amabini kwaye lineringi yegolide ejikelezileyo. Ezinye iikhamera ezimbini zidibene kwindlu emnyama ngelixa i-LED emilise okweepilisi ihleli ngokuthe nkqo ngaphantsi komgangatho.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani ikuqinisekisile oko ifowuni iza kuza nekhamera ye-586 MP ye-Sony IMX48 Kwaye iya kuba nenkxaso yokurekhodwa okuhamba kancinci kwi-960 fps.
Apha ngezantsi kukho uphawu lweRedmi kunye namagama Yenziwe nguRedmi ». Kukho iqhosha lamandla ekunene kwefowuni kunye namaqhosha olawulo lwevolumu. Ngelishwa, asinakho ukwahlula amazibuko kwisixhobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ikhamera kathathu yeRedmi K20 ityhilwe kwaye yaqinisekiswa kwimifanekiso yayo emitsha enikezelweyo
I-Stable Android Pie ikhutshwe ngokusesikweni kwi-OnePlus 3 kunye ne-3T